ချစ်ဇနီးအတွက် ကြည်နူးစရာမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားဆိုလာတဲ့ ခင်လှိုင်
သူတို့ရဲ့ သမီးလေးကလည်း မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားပါသေးတယ်။
ခင်လှိုင်က ချစ်ဇနီးချော အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် အနမ်းတွေ ခြွေခဲ့ပါတယ်. သူတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုလည်း သမီး အငယ်ဆုံးလေး သဇင်ထူးမြင့်က အခုလိုပြောပြလာပါတယ်
သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်တစ်ယောက် သူချစ်ရတဲ့ ဇနီးချော မငယ်လေးရဲ့ မွေးနေ့အမှတ်တရအတွက် ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကား ပြောခဲ့ပါတယ်.
'' ဒီနေ့ ကျွန်တော်ချစ်သော ချစ်ငယ်လေးရဲ့မွေးနေ့ မွေးနေ့လက်ဆောင် မွမွ'' ဆိုပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် ချစ်ဇနီးချောနဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း အတူတွဲတင်ခဲ့ပါသေးတယ်. ခင်လှိုင် တို့ ဇနီးမောင်နှံမှာတော့ သား ၂ ယောက် သမီး တစ်ယောက် အပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြေးလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်.
အဲ့ဒီနောက် ခင်လှိုင်ရဲ့ သမီးအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကလည်း ချစ်ရတဲ့ မေမေ့အတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကားပြောပြလာပါတယ်.အဲ့ဒီနောက် မိခင်ဖြစ်သူကို လေးစားရတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့တာကို တွေ့ရ ပါတယ်
'' Happy Birthday ပါမေမေ။ မေမေက သမီးဘဝမှာ အလေးစားရဆုံးစိတ်ထားရှိတဲ့သူပါ မိန်းမသားတစ်ယောက်ပေမယ့် အရမ်းကိုထက်မြက် ပြီး ဦးဆောင်နိုင်တယ်။ စိတ်ဓာတ်မာတယ်။ ခက်ခဲတဲ့အခြေနေတွေမှာတောင် သားသမီးတွေအတွက် အမြဲဦးစားပေးတွေးပေးတတ်တယ်။ မေမေက လူငယ်တစ်ယောက်လိုသွက်လက်ပြီး ပြဿနာတိုင်းကိုအေးဆေးဖြေရှင်းနိုင်သလောက် သမီးကအမြဲပျော့ညံ့နေတတ်တယ်'' လို့ ဆိုပါတယ်.
သဇင်ထူးမြင့်က ဖေဖေ နဲ့ မေမေ တို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေကိုလည်း မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကားလေးထဲမှာ ဆက်လက်ရေးသားထားပါသေးတယ်.မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမ မှုတွေကိုလည်း အားကျမိတဲ့ အကြောင်း ပြောပြထားပါတယ်.
''တစ်ခုခုဆိုမျက်ရည်အရင်ကျတတ်လွန်းတယ်။ မေမေကတော့ ငိုတာထက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုပဲ အရင်စဉ်းစားပြီး ဖြေရှင်းတတ်တယ်။ မေမေရဲ့စိတ်ကိုသမီးကြာလေ အားကျလာတယ်။ ပြီးတော့ဖေဖေပေါ်လည်း မေမေကအရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာ သမီးတို့သိတယ်။ ဖေဖေရှိ နေရင် ကို မေမေကပြုံးနေတတ်တယ်။ အဲ့ဒီအပြုံးလေးကပဲ သမီးတို့ကိုနွေးထွေးစေတယ်။ မေမေ့ကိုအမြဲစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်။ သမီးလည်း အများကြီးကြိုးစားပါ့မယ်။ မေမေ့ကိုအရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုပါတယ်'' လို့ သူကဆိုပါတယ်
ဟာသ သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်ကတော့ လိုချင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ သားသမီး ၃ ယောက်စလုံး ကလည်း လိမ္မာကြတယ်၊သားအကြီးဆုံးက အိမ်ထောင်ကြပြီးသွားလို့ ကလေးရနေပြီ၊ သားငယ်ကတော့ နေရဲပါ အနုပညာအလုပ်လုပ် နေတယ်၊ သမီးငယ်ကတော့ တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်တက်နေတယ်လို့ Duwun Media ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။